မူလနရော » Kitakyushu-city
Updated: 2016-10-17 16:04
ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ခွေးပွဲတော် (မိုဂျိကိုး)
မွေးမြူ သူ တို့ နှင့် ခွေးလေး တို့ ရဲ့ သံယောစဉ် ကို ခိုင်မြဲစေခါ ၊ စွန့် ပစ် ခြင်း များ ပြုလုပ် မှု လျော့ နည်း သွား ရန် ရည်ရွယ် ကာ ကျင်းပပြု လုပ် တဲ့ ပွဲတော် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန် ထိမ်...
Updated: 2016-07-11 15:22
Riverwalk Kitakyushu　ကျူရှူးမြောက်ပိုင်းခရိုင်
Riverwalk Kitakyushu ကျူရှူး ခရိ်ုင်မြောက်ပိုင်း က မူရစခိ မြစ် ၊ ကိုခူရာရဲတိုက် နှင့် ခါမစွတ် ရာမ ပန်းခြံ အစရှိတဲ့ သဘာဝရှုခင်း တွေ နဲ့ သမိုင်း တို့ က ခြံ ရံ ထား တဲ့ နေရာ အလယ် ဗဟိုတည့်တည့်မှာ တည်ရှိပြီ...
Updated: 2016-04-18 13:13
ကိုခုရာ ရဲ တိုက်
ကန်းမွန်း ကန်း ခရော ကို မျက် နှာ မူ ထား တဲ့ ကိုခုရာ ရဲ တိုက်ဟာ ရေလမ်းကော ကုန်းလမ်း အတွက် ပါ အရေး ပါလှတဲ့ မြို့ တစ် မြို့ ဖြစ် ပြီး တော့ တိုးတက် လာခဲ့ ပါတယ်။ဦး ဟိုစိုးခ၀ ၊ ဦးအိုစဂါဝါရ တို့ က အဲ့ ဒီ ရ...
Updated: 2016-04-11 15:58
ပင်လယ် နဲ့ နီးနီး လေး မှာ ဆောက် လုပ် ထား တဲ့ အမြင့် ၁၀၃ မီ တာ မြင့် တဲ့ တိုက် ကြီး ၊ ( Retro high Mart ) ရဲ့ ၃၁ ထပ် မှာ ရှိ တဲ့ မိုဂျိကိုး ရဲ့ထရို လေ့လာရေး အခန်း ဟာ ဆို ရင် ကမ်း ခြေ မြို့ တစ...
Updated: 2016-03-29 15:45
ခါ၇တို ဈေးကြီး ဟာ ဖုဂူး ငါးဈေး ဆို ပြီး တော့ ကော ၊ တိုင်း နဲ့ ဟာမချိ ငါးတွေ အစရှိ တဲ့ လတ် လတ် ဆတ်ဆတ် တွေ ကို စား သုံး နိုင် တဲ့ ဈေး ကြီး ဆို ပြီး နာမည် ကြီး ပါ တယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှိ တဲ့ ငါး တွေ...
Updated: 2016-03-07 16:47
(space world ) ဟာ space ကို ဇာတ် ကောင် အနေနဲ့ လုပ် ထား တဲ့ ကစားကွင်း တစ် ခုဖြစ် ပါတယ်။ ကလေး ကနေ လူ ကြီး အထိ ပျော်စရာတွေ ကောင်းတဲ့ space အတွေ့ အကြုံ တွေ ကို ခံ စား နိုင် စေဖို့ စွန့်စားခန်းတွေ စီးစရာတေ...
Updated: 2016-02-15 15:26
小倉城庭園 ကိုခုရာ ရဲ တိုက် ဥယာဉ်
ဥယဉ် ဇုံ ၊ စာရေးခန်း ဇုံ စမ်းသပ် ရန် ဇုံ ကနေ ဖြစ် ပါတယ်။ ဥယဉ် ဇုံ က( အိခဲ ဇု မိ စတိုင် ) ဥယာဉ် မှာ ရေကန် ကို ပတ် ကြည့်ရင်း ရှု ခင်း တွေ ကို ခံ စား နိုင် ပါ တယ်။ ရှော် အင်း ဇုံ မှာ ကတော့ ဂျပ...